Maxkamada Ciidamada oo bilowday dhagaysiga dacwada dilkii Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxkamada Ciidamada oo bilowday dhagaysiga dacwada dilkii Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta bilowday dhagaysiga dacwad lagu soo oogay dilkii magaalada Muqdisho loogu geystay Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun.
Guddi hore loogu xilsaaray baarista dilka guddoomiyihii hore ayaa maxkamada horgeeyay cadeeymo la xiriira sida uu dilka Guddoomiyihii Hodan u dhacay.
Xeer Ilaaliyaha guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Jeneraal Cabdullaahi Buulle Kameey ayaa hore u sheegay in dilkii loo geystay Allaha u naxariistee Cabdixakiin Dhaga-juun uu ahaa mid dhacay si kula kac ah, ayna ku ogaadeen baarista la sameeyay.
Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise DhagaJuun ayaa 21-kii Bishii Janaayo ee Sanadkan waxaa lagu diley bartamaha magaalada Muqdisho iyadoo dilkiisana ay ka dambeeyeen ciidamo boolis ah.
Maxkamada Ciidamada oo bilowday dhagaysiga dacwada dilkii Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan was last modified: April 24th, 2021 by Admin
video:-Heshiis laga gaaray Aaska Meydadka Weerarkii Bariire
Dhageeyso Warka Habeen Ee Wrsan Radio Caawa waxaa idin soo gaar siinaysa Shuki Bidhaan 4-11-2016